Inona ireo fomba ahafahana manintona rindran-damina tsara amin'ny tranokalanao?
Te hanomboka ity lahatsoratra ity miaraka amina famaritana fohy ho an'ny olona vaovao aho ato amin'ity lohahevitra ity. Ny rohy mankany aoriana iray dia rohibe iray avy amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa. Raha ny fitsipika, misy rohy iray dia ampidirina ao anaty lahatsoratra ary toa endri-tsoratra. Amin'ny fipihana io lahatsoratra io dia mandehana ao amin'ny lahatsoratra manazava na tranonkala iray izay voatanisa ato amin'ity votoaty ity. Ny rohy toy izany matetika dia manome fampahalalana mahasoa sy mpampiasa tranonkala hanampy ny mpanjifany amin'ny tranonkalany raha toa ka vita ny zavatra rehetra.
Ity lahatsoratra ity dia natao hampianarana anao ny fomba hahazoana bakalorea tsara amin'ny tranokalanao. Tiako ny hampandroso anao amin'ny fitaovana ilainao mba hahazoana ny finday tsara indrindra sy hampitombo ny fahafahanao.
Tsy mitovy daholo ny backlinks rehetra. Izany no mahatonga anao hitandrina be rehefa manorina rohy amin'ny tranokalanao. Amin'ny ankapobeny, ny rindran-damina dia ampiasaina amin'ny tanjona roa. Ny voalohany dia ny manampy ny vohikala hanatsara ny jiosy fifandraisana ary hanangana ny mason'ny marika ao amin'ny tranonkala. Ny faharoa dia ny miteraka voka-dratsy amin'ny tranonkala fifaninanana na tsy misy ifandraisany amin'ny anao.
Ahoana no anavahana lamandy avo lenta?
Amin'ny ankapobeny, ny rindran-damina avo lenta dia ireo avy amin'ny tsara indrindra amin'ny tranonkala. Izy ireo dia manan-danja sy mahaleotena. Ny olona betsaka kokoa mifandray amin'ny toerana tsara indrindra, ny tsara indrindra dia ny fijerin'ny tranokalan'ny fikarohana. Google dia hijery ny rohy toy izany ary hamaly ny tranonkala mifandraika amin'ny alalana ambony sy ny laza tsaratsara kokoa. Izany indrindra no ilainao hitadiavana ny fananganana rohy.
Na izany aza, araka ny filazako aloha dia tsy ny firafitry ny rindran-damina rehetra no natsangana fa mitovy ihany koa ary avy lavitra avokoa ny rehetra dia mitovy. Izay no antony tokony hahafantaran'ny webmasters hoe inona no mahatonga ny lohamilina avo lenta.
Andramiantsika ny sasantsasany amin'ireo singa manan-danja amin'ny lohamilina ara-bika sy avo lenta:
mifandraika amin'ny rindrin'ny tranokala navoaka;
avy amin'ny loharanom-baovao azo itokisana;
mandefa fifamoivoizana mifandraika;
mifototra amin'ny votoatin'ny tranonkala;
tsy voavaly na resy;
tsy toy ny dokambarotra;
dia manampy ny PageRank.
Sarotra avo lenta toy izany. Izany no mahatonga azy ireo hankasitraka ny fikarohana sy ny mpampiasa. Ankoatra izany, tokony mila rohy toy izany avy amin'ny loharano isan-karazany ianao, fa tsy rakitra miisa 100 avy amin'ny tranokalan'ny PR. Ataovy an-tsaina fa mety hitan 'i Google fotsiny ny miezaka mamitaka ny rafitra.
Inona avy ireo fomba tsotra indrindra ahafahana miverin-dalana amin'ny tranokalanao?
Ny zavatra voalohany tokony ho azonao dia ny hoe mila miorina, tsy nividianana rakitra. Ny tetikady fanorenana rohy tonga lafatra dia hiorina amin'ny asa mafy, ary izany rehetra izany. Mazava ho azy fa handany fotoana bebe kokoa hamoronana rohy ianao. Na izany aza, ho azonao antoka fa hanome rohy maharitra ho anao ireo rohy toy izany.
Misy fomba vitsivitsy ahafahana mahazo ny rindran-tsavily tsara:
Mba hahazoana rohy mahazatra, dia azonao atao ny mametraka ny anaranao sy ny fampahalalana momba ny haitao avo lenta,. Mety ho tsy maintsy handoa ny sasany amin'ireo ireny torohay ireny ianao. Na izany aza, alohan'ny hametrahana tolotra fananganana rohy, dia mila antoka fa tsy tranonkala spammy io.
Teknolojia fanorenana iray hafa ilaina ho lasa mpitoraka bilaogy vahiny. Miaraha miasa amin'ny blaogy voatahiry ao amin'ny niche ary mamoaka lahatsoratra mahaliana sy mahaliana miaraka amin'ireo rohy tafiditra ao amin'ny tranokalanao Source .